युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कोरोनाको खोप लगाउँदा मदिरा सित्तैंमा!!!! – Nepali Taja Khabar
युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कोरोनाको खोप लगाउँदा मदिरा सित्तैंमा!!!!
कोरोनाको खोप लगाउँदा मदिरा सित्तैंमा पाइने अफर आएको छ । खोप लगाउन युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो अभियान इजरायलमा सुरु गरिएको हो ।
इजरायलमा एउटा बारमा खोप केन्द्र स्थापना गरिएको छ जहाँ खोप लगाउने व्यक्तिलाई सित्तैंमा ड्रिंक दिइन्छ । तेल अभिभको जेनिया ग्यास्ट्रोपबलाई बारसँगै खोप केन्द्र समेत बनाइएको हो ।
टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार महामारीको समयमा लामो समयसम्म यो बार बन्द थियो तर अब यसलाई नयाँ स्वरुपमा खोलिएको हो । यो बार बिहीबारदेखि खुला छ ।
इजरायलका ४३ प्रतिशतभन्दा धेरै जनताले कम्तीमा एक डोज खोप लगाइसकेको यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यहाँ फाइजरको खोप दिइँदैछ र बढी उमेरका अधिकांशलाई खोप दिइसकिएको छ ।
युवा पुस्तामा भने कोभिडको जोखिखम पनि कम हुने भएकोले उनीहरु खोप लगाउन कम रुची गर्ने समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै यो नयाँ अफर ल्याइएको हो । इजरायल भ्याक्सिन दिने काममा विश्वमै अग्रस्थानमा छ र उसले आफ्नो ठूलो जनसंख्यालाई भ्याक्सिन दिइसकेको छ ।
तर, पछिल्ला केही हप्तामा खोप लगाउने मानिसहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । कम जोखिममा रहेका समूहलाई पनि भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरिएपछि यो संख्या घटेको हो ।
यो पनि पद्नुहोस;- ‘प्रचण्डजीको माया लाग्छ । पहिले उहाँसँग वैद्य हुनुहुन्थ्यो । वैद्यले छाड्नुभयो, डाक्टर लिनुभयो । उहाँले नि छाड्नुभयो, अहिले झाँक्री लिनुभयो । वैद्यबाट डाक्टर, डाक्टरबाट झाँक्री तर उहाँलाई अब झाँक्रीले बचाउन सक्दैन,’ ओलीले भने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अब काँध हाल्न नसक्ने बताएका छन् । नेकपा ओली पक्षले विराटनगरमा शनिबार आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै न‍ेकपा अध्यक्ष रहेका ओलीले दुई/चार सिटमा सीमित हुन लागेका दाहाललाई आफूले ठूलो बनाए पनि गलत बाटो हिँडेकाले अब काँध नथाप्ने टिप्पणी गरेका हुन् ।
दाहालले राजनीतिमा गलत बाटो छानेको उनको नियति अब असफलता मात्रै रहेको ओलीले दाबी गरे । ‘सिद्धिइसकेको प्रचण्डलाई, २/४ सिटमा सीमित हुने प्रचण्डलाई ल्याएर मैले एउटा ठूलै जुरो हालिदिएको थिएँ । जुरो भएपछि अलिकति सिङ पनि हालिदिएको थिएँ । लामा सिङ भएपछि उहाँमा अहंकार चल्यो । उहाँले हामीलाई सिध्याउन खोज्नुभयो,’ ओलीले भने,’उहाँको नियति अब असफलताबाहेक केही छैन ।’
‘प्रचण्डजीको माया लाग्छ । पहिले उहाँसँग वैद्य हुनुहुन्थ्यो । वैद्यले छाड्नुभयो, डाक्टर लिनुभयो । उहाँले नि छाड्नुभयो, अहिले झाँक्री लिनुभयो । वैद्यबाट डाक्टर, डाक्टरबाट झाँक्री तर उहाँलाई अब झाँक्रीले बचाउन सक्दैन,’ ओलीले भने,’उहाँले गलत बाटो छान्नुभयो । राजनीतिमा गलत बाटो छान्नुभयो । विकासको बाटोमा तगारो हाल्न खोज्नुभयो । नेपालको राजनीतिमा अब उहाँले सफलता पाउने सम्भावना छैन ।’
दाहाललाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘अझै पनि तपाईं फर्कन चाहनुहुन्छ भने फर्कनुहोस् । मिसिन हुन्न भने भीरबाट लड्नेलाई राम भन्न सकिन्छ काँध हाल्न सकिदैन । खिइँदै गएर सिधिने बाटोमा प्रचण्ड जानुभयो ।’
पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गराइदिएपछि सत्तारुढ नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएको छ । ओली समूह र दाहाल-नेपाल समूह बनेपछि आन्दोलन र सभा गर्दै नेताहरु एक अर्काबीच आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रेका छन् ।
अब प्रचण्डलाई काँध हाल्न सक्दिनँ : प्रधानमन्त्री ओली
पहिरोले माइती घरनै पुर्यो, एकै ठाउँमा २५ जना बिते ! भाग्यले बाँचेकी चेली यस्तो अवस्थामा (भिडियोसहित)